DAAWO SAWIRADA:Madaxweynaha Somaliland Oo Caawa Kudhbad Ka Jeediyay Madal Ay ka soo Xaadireen Wax Garadka Gobol Sool . |
DAAWO SAWIRADA:Madaxweynaha Somaliland Oo Caawa Kudhbad Ka Jeediyay Madal Ay ka soo Xaadireen Wax Garadka Gobol Sool .
Laascaanood (GNN) Weftigii Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silaanyo ee ku sugnaa gobolka Saraar ayaa maanta oo taariikhdu tahay 19/08/2016, uga si gudbay gobolka Sool, gaar ahaan degmada Adhi-cadeeye oo si aan hore loo arag, miisaan leh oon loo kala hadhin loogu soo dhaweeyey.
Madaxweynaha Somaliland iyo Weftigiisu waxay soo dhawayntii ugu balaadhnayd kala kulmeen shacbiga deegaamada Guumays, Yagoori, Tuulada Samakaab iyo Degmada Cusub ee Adhi-cadeeye.
Waxanay shacbiga ku dhaqan halkaasi ay subaxnimadii hore jidadka iyo koonayaasha magaalada ku qaabileen kuna soo dhaweeyeen caleemo qoyan iyo sawaxan qiiro iyo kalgacal ka muuqdo, taasoo ay hoggaaminayeen, garaadada, ugaasyada, salaadiinta, cuqaasha, masuuliyiinta deegaamadaasi, aqoonyahanka, waxgaradka iyo bulshada qaybeheeda kala duwan.
• Tabashooyinka Deegaanada Sool,Xaysimo iyo Buuhoodle
• Midnimada iyo wadajirka Ummadda
• Adkaynta Nabadgalyadda
• HorumarkaTabashada Bulshada Gobolada Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle
Waxaan xogogaal u ahay in hoggaamiyayaasha siyaasadda iyo dhaqanka ee deegaannada Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle ay ka qabaan Qawad iyo Tabasho qaabka awood qaybsiga talada Dalka.
 Waxaan aaminsanahay in cadaaladdu tahay waxa kaliya ee ummadi ku walaaloobi karto.
 Waxaan aaminsanahay in beelaha iyo bulshada Somaliland yihiin kuwo siman oo leh xaq iyo xurmo isku mid ah. Waxaan leeyahay sidii ninkii yidhi “Dadku waa wada Ciise oo midna mid Caaro Ma dheera”.
 Waxaan aaminsanahay in la qaybsado hawsha, halabadda iyo hantida qarankan yagleesha ah.
 Waxaan garwaaq-sanahay in ay jid iyo daw tahay, in dhib iyo dheef la wadaago.
Waxaan gar u arkaa in wixii qaldamay la saxo. Waxaan gar u arkaa in la dheeli-tiro awood-qaybsiga talada Dalka. Waxaan ku qanacsanahay in loo baahan yahay in dib-u-eegis lagu sameeyo saami-qaybsiga kuraasta Baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland.
Walaalayaal, waxaanu diyaar u nahay in aanu idinka tirrno tabashada iyo turxaan kasta oo aad tirsanaysaan.
Ma nihin dad kala tagi kara, mana nihin dad kala tashan kara, ee waxaynu nahay Dad isku dan ah oo isku Dal ah.
Walaalayaal, waxaan leeyahay aan wada tashanno, oo aan isku tashanno, oo aan is aaminno.
Waxaan soo dhawaynayaa go’aanadii shirka Awr-boogays ka soo baxay.
Waxaan soo dhawaynayaa dhammaan heshiisyadii iskaashiga iyo wax wada qabsiga ahaa ee ku dhex maray Xukuumadda Somaliland iyo Beelaha Maxamuud Bari, Hinjiinle iyo Cabdiraxmaan Harti.
Sidoo kale, waxaan hambalyeynayaa shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Caynabo.
Waxaan soo dhawaynayaa natiijadii Shirkaa ka soo baxday ee salka ku haysay bilowga nabad iyo wada hadal dhex mara Xukuumada Somaliland iyo Khaatumo.
1. In la xoojiyo nabadgelyada
2. In la abuuro jawi isfahan iyo wax wada qabsi
3. In la ururiyo, lana mideeyo aragtiyaha kala duwan ee degaanadan.
4. In loo gogol xaadho shir wayne balaadhan oo ay kuwada xaajoodaan Somaliland iyo wax-garadka deegannada Sool, Xaysimo iyo Buuhoodle kaas oo ah, ka aan maanta, madasha ka muddeeyay.
Haddaba, siyaasada xukumadda aan gadhwadeenka ka ahay, waxaa udub dhexaad u ah ururinta iyo midaynta shacbi waynaha Somaliland. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ahay oday ruug cadaa ah oo Ummad u arriminaayay in ka badan (40) sanno, uma aqaan siyaasadda hoggaamiyaha hagaagsan Dulmi, Dirsooc iyo Dad la kala qaybiyo.
Markii kulankaasi u soo afmeermay waxa weftigii madaxweynaha loo gelbiyey magaalo madaxda Gobolka Sool ee Laascaanood, oo ay weftiga Madaxweynuhu hoggaaminaayey caawa u hoydeen kuna sugnaan doonaan, taasoo taariikhda gobolka ku suntanaan doonta, marka loo eego intii uu jiray gobolka sool oo aanu weligeed Madaxweyne u hooyan, isagoo madaxweynuhu taariikhdaas mid la mid ah ka dhigay gobolka markii uu madaxweyne Axmed Siilaanyo safaro kala duwan ku yimid magaalada kana fuliyey mashaariico dhawr.